Shina T-Shirt zazalahy 12-16 taona lava T-Shirt PY-TC003 fanamboarana sy orinasa | Pinyang
T-shirt zazalahy lava 12-16 taona
1. T-shirt inona no mety ho an'ny zazalahy kely?
Ho an'ny ankizy, ny akanjo miloko isan-karazany dia tena mety amin'izy ireo - ny tara-masoandro sy ny hatsarana no fampiasa mahazatra ho an'ny ankizy. Tiantsika rehetra ny rivo-piainana tsy manan-tsiny sy tantaram-pitiavana an'ny ankizy, ka tsy mifidy ny lokon'ny akanjo ny ankizy. Raha "mahazatra" amin'ny loko iray izy ireo raha mbola tanora dia ho very ny nofinofin'izy ireo maro loko. Mila T-shirt tia namana sy lamaody ry zareo, ity lamba vita amin'ny lamba landy madio ity, matetika ny ankizy hatsembohana rehefa milalao, avy eo ny landihazo madio no lamba mpitroka hatsembohana tsara indrindra, mitafy aina sy tsy voafehy ny ankizy.
2 、 Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny T-shirt misy tady?
T-shirt fotsy dia tsotra sy mahavariana, mora ampifanarahana amin'ny loko isan-karazany amin'ny akanjo, tena mora hamirapiratra, ka amin'ny fahavaratra dia be mpitia amin'ny zazalahy sy reny kely. Ohatra, ity T-shirt fotsy ity dia tsotra sy tsotra, miaraka amina famolavolana lamina mitelina mahaliana eo amin'ny sisiny, izay mahatonga ny T-shirt manontolo ho malefaka kokoa, tsotra ary maody.
Ity T-shirt fotsy ity dia manana endrika tsy ara-dalàna eo amin'ny sisiny. Ny famolavolana trapezoidal fanapahana dia mahatonga ny T-shirt manontolo ho hafa be sy mampiavaka azy tokoa. Ity T-shirt tsotra sy tokana ity dia afaka mampiseho ny toetran'ny ankizy amin'ny lamaody amin'ny fahavaratra.
T-shirt milomano fotsy, T-shirt fotsy misy volavolan-doko mahazatra ary avy eo miaraka amina endrika mahaliana, T-shirt toy izany noho ny T-shirt fotsy tsotra dia somary kanto sy kanto ary lamaody ary kanto.
Fampiasana vokatra: ho an'ny akanjon'ny vondrona, fanaingoana manokana, sns., dia afaka manamboatra loko, lamina, sary famantarana.
A: mpanamboatra sy mpivarotra ambongadiny mivantana izahay izay manana traikefa 5 taona.
A: Izahay dia matihanina mpanamboatra akanjo knitting ankizy, ny tena vokatray dia T-shirt, pataloha, short, sweatshirts, volon'ondry, palitao, s sy akanjo ho an'ny zaza 0 ~ 10 taona.
F: Inona ny kalitaon'ny vokatrao?
A: Noraisinay lamba tsara sy tsara Eco-friendly, breathable ary ahazoana aina, tsara ho an'ny hoditry ny zaza izany .Ny vokatray dia nandalo ny fitsapana fitafiana SGS.
F: Maninona ny vidinao ambany noho ny mpamatsy hafa?
A: Mariho tsara fa izahay no mpanamboatra sy mpivarotra ambongadiny voalohany, noho izany dia ambany ny vidinay.
Ny vokatra dia mitovy kalitao amin'ny vidiny ambany indrindra, ny vidiny mitovy amin'ny kalitao tsara kokoa.
F: Azoko atao ve ny manana ny sary famantarana amin'ny vokatra?
A: Eny, azonao atao ny manana ny fango amin'ny vokatra. Ny MOQ dia 50pcs / endrika. azafady mifandraisa aminay raha ny baiko manokana.
A: Raha manafatra ireo volavola ankehitriny, dia vonona ny halefa izy ireo. Ny fonosana dia halefa ao anatin'ny 7 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola. Ny fotoana andefasana dia miankina amin'ny firenena alehanao
Raha serivisy manokana, ny fotoana fandefasana manokana dia miankina amin'ny entana sy ny haben'ny baikonao.
F: Ahoana no hamahana ny olana amin'ny kalitao aorian'ny varotra?
A: Makà sary ireo olana ary andefaso aminay. Hanao vahaolana afa-po ho anao izahay ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fanamafisanay ny olana.
Previous: Làlan-jaza fotsy fotsy mifanaraka amin'ny PY-YR002
Manaraka: Toro-marika azo zahana lava T-Shirt zazalahy lava PY-TC001
T-Shirt zazalahy kely 100% landihazo T-Shirt PY-TD002